Isipho ezimangalisayo ingane hhayi kuphela: isibonakude
Nge ukuqedwa izikole Russian yezinkanyezi kukhona ezincane abathweswe iziqu ukwazi okungenani okuthile izinkanyezi. Kodwa akuyona yonke into isixazululekile ulwazi, njengoba abantu usathanda ukubheka izinkanyezi, okuyizinto wonke e okufanayo ukuyengela romanticism akhe angenakuqhathaniswa. Kuphela intambo mncane ukuthi angisakwazi fikisa us closer lezi zinkanyiso, kuyinto isibonakude. Bambalwa abantu ungazange ngiphuphe njengoba ingane lokhu isibonakude, lapho umuntu ayengathola khona ukubona zonke inkanyezi futhi iplanethi. Unalo ithuba ukufeza leli phupho, uma kungekhona themselves ngalesosikhathi izingane zabo: ukuthenga isibonakude ngabo.
Engaqaliwe butholakala enqubweni eyinkimbinkimbi yokuthela le yokukhanya akulula ukuqonda isakhiwo ngisho omabonakude elula, ingasaphathwa insimbi ezifana eyinkimbinkimbi njengezimpi isibonakude. Kodwa iphuzu liwukuthi ukuthi akungenxa kangaka ukwazi uma ukhethiwe. Noma yimuphi isibonakude sinezici eziningana eziyisisekelo: ububanzi lens, ukukhulisa futhi ububanzi ophumayo umfundi.
Imiyalelo noma iyiphi imodeli oyikhethile, ungathola postscript, isib, 10x30, lapho 10 kuyinto kokukhulisa, futhi 30 - ububanzi we lens. I kaningi kuncike ngokuyinhloko uhla kanye nekhwalithi ukubuyekeza, kodwa nokujaha indices inkulu kakhulu akudingekile, ngoba ayanda kaningi, ephansi ukuzinza isithombe. Ngenxa yalokho, eziningi ezinkulu kakhulu isibonakude yakho nje gcoba isithombe.
Ukuze bavale isikhala leli phutha, sebenzisa emikhulu ubukhulu lens. Ngakho, ayanda kunjalo, ukukhanya okwengeziwe kuba, futhi libukhali ukubonakala kwezinye izinto ezikude. Zama ukukhetha labo okungu lapho ubukhulu lens akuyona izikhathi esingaphansi emithathu kuya kwemine ephakeme ukwedlula isilinganiso. Kuleli kuncike olandelayo inkomba izinga.
I ububanzi ophumayo umfundi kuboniswa ndawo, kodwa ubukhulu bayo kungaba azimisele sokuhlukanisa 30 ngo-10 (inombolo lesibili nelokuqala). Imiphumela iba yinhlanganisela yokukhandleka 3 mm, futhi kube inkomba yokuthi ophumayo umfundi. Optimum lingakanani kufanele kube kungekho kuka 4.25 hhayi ngaphansi kuka 3.50 mm, kungenjalo isibonakude yakho ngeke ukhiqize isithombe izinga izinto uyalandelwa.
Ethandwa kakhulu phakathi kokubili ochwepheshe kanye nayizimfundamakhwela zisebenzisa izibonakude Yukon. Le nkampani isekela nebhalansi phakathi intengo nekhwalithi, enikeza ngemali ephansi kakhulu kulabo noma ezinye izinketho. Yiqiniso, zikhona nezinye izinkampani eziningi, kodwa kungani engozini izinga noma overpay igama elikhulu?
Ungakhohliswa! Azikho izibonakude ukuze sibuke isibhakabhaka ebusuku: ukukhanya kancane kakhulu ukuze ezisesithombeni kancane ecolekile. Noma kunjalo ezitolo nabathengisi ngokuvamile zama ukudlala kwi nalwazi amakhasimende abo ngokuwafaka ohlwini umsebenzi ngokusobala ngoba wawungekho. ukufunda Njalo izici lobuchwepheshe zedivayisi ngokucophelela futhi musa overpay ngemininingwane engadingekile.
Manje ngoba sewuyazi ukuthi kanjani ukukhetha okuhle isibonakude, kusho ukuthi sekuyisikhathi sokuba athathe isinyathelo. Futhi khumbula ukuthi isibonakude - lokhu akulona nje ithuluzi, kuba ngosizo okuyinto wena khumbula ebuntwaneni, ekugcwaliseni isifiso babo ababathandayo. Ngaphezu kwalokho, ukunikeza izingane zakho ithuba, egqolozele phezulu esibhakabhakeni, nje ukuphupha we engenakufinyeleleka, lo esikhulu futhi esimangalisayo!
Coat, isudu Upholstery Indwangu boucle. Izici kanye Imininingwane
Hammock-kwesitulo - "sombuso onkulunkulu"
Esperanza (stroller): Ingabe ukuthengwa?
Indlela ukukhetha isibhamu glue. izibhamu Glue ngoba ngenalithi
Amazwi Compound nge impande "amanzi." Ukwakheka amagama ayingxube kanye impande "amanzi"
"ZenSlim": ukubuyekezwa, imfundo, incazelo kanye analogs. "ZenSlim Cardio": Izibuyekezo
Polonium 210: isigamu-nokuphila. Kuyini ukusetshenziswa polonium 210?
Salad izaqathe kanye apula. zokupheka Simple.
Ukwelashwa nokuvikelwa izakhamuzi: inkathi ukuba siyicabangele. Ukwephula ngokuya nokucutshungulwa kwezikhalo izakhamuzi '
Kuyini like ukulwa nezinye izingane? Ngomuntu wesifazane ngamunye zonke ngamunye
Fouette - umdanso sibalo
Ubani Ngingxhumana uma ebeka ekhaleni?
Levonorgestrel: iyini le hormone, futhi iyaphendula ngani emzimbeni?